I-Villa Kanan - I-Luxury Seaview Villa ehlathini - I-Airbnb
I-Villa Kanan - I-Luxury Seaview Villa ehlathini
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguNicolas
I-Kanan ilahlekile ngokwenene ehlathini, ejonge iSelong Belanak kunye neMawi wave, kude nayo nayiphi na ingxolo yezithuthi (ngaphandle kweenkomo), kunye ne-mosque enkulu!
I-Kanan yindlu yabucala enento yonke oyifunayo: inkonzo yemihla ngemihla, ukupheka, ukhuseleko, i-intanethi, i-Jcl, kunye neRolland Piano!
Imibuzo ekhethekileyo (umz. ixesha elide, umqhubi, umpheki, izinto ezenziwayo njl.), vele usibuze kwaye siza kwenza konke okusemandleni ethu ukwanelisa iimfuno zakho!
Ezimihla ngemihla yaye zihonjiswe ngendlela eyi-270 ° phezu kolwandle lweIndiya kunye nezityalo zetropiki.
Ilungele iholide yosapho okanye uhambo kunye nabahlobo, iKiri iza nepuli yabucala, ikhitshi elihle elivulekileyo kunye nengaphakathi elihle.
Iifestile zegumbi lokuhlala zivulela kumgangatho wepuli ukuze kubekho indawo ekhethekileyo (350sqm) yokuhlala, kunye nendawo yokuhlala yangaphakathi nangaphandle kunye nendawo yokutyela. Singalinganisa kakuhle abantu abayi-12 ngoko ungamema abahlobo ukuba bahlale kamnandi emva kwemini okanye isidlo sangokuhlwa. Vumela umoya uvuthuluke, uze uvule iifeni?
La magumbi okulala mabini anegumbi lokuhlambela elineshawa eshushu (elinye likwanayo nebhafu enkulu yangaphandle) kunye nendlu yangasese, ikona yokuhlala kunye newardrobe evulekileyo eneemethi ze-yoga kunye nekhuselekileyo. Ibhedi eyongezelelekileyo ye-mezzanine iyafumaneka kwikona yeofisi, kwaye ineshawa yayo kunye nendlu yangasese kunye neendawo ezintle eSelong Belanak.
Sineetawuli ezipheleleyo eziza kwenza uzive uthe zava (izandla, ubuso, ishawa kunye nohlobo lwephuli).
Ikhitshi litsha kwaye linefenitshala epheleleyo - isitovu, ioveni, into yokupheka irayisi, i-toaster, i-blender... (izixhobo ezisisiseko) - kunye nekhitshi langaphandle elinendawo yalo yokoja!
Le ndlu ikonekthwe kwi-intanethi nge-migca ibe iyafumaneka kuyo yonke iKananan.
Siphezu kwenduli enemibono emihle ngaphezulu kweSelong Belanak (i-7km ukuhamba-i-12 mins drive) kunye nokujonga ngokuthe ngqo kwi-Mawi wave. I-villa ijikelezwe yimithi yekhokhonathi kunye nezityalo zetropiki.
Indawo ikwathule kakhulu: eyona ndlela kawonke-wonke ikufutshane kuma-500m phezulu kwaye ii-mosque nazo zikude. Isandi sokugqibela sivakala njengomculo ongasemva othambileyo.
Akukho nto inokukuvusa ngaphandle kwezaqhwithi, umoya kunye nezilwanyana zasendle...
Siyakufumaneka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ukukunceda. Iqela le-10 (ukucoca, ukugcinwa kunye nokhuseleko) liya kukunceda yonke imihla ukuba ufuna nantoni na. Indlu yabasebenzi ingaphantsi nje ngeemitha ezimbalwa kwisiza kwimeko kaxakeka.
Iqela lethu liyakwazi ukuncedisa ekuphekeni kwaye sibonelela nge-minibar epheleleyo (kubandakanya i-snack kunye nokutya). Ukuba uyayifuna, sinokukubonelela ngomqhubi kunye nokulungiselela imisebenzi eyahlukeneyo. Kuya kuba luvuyo ukukhonza wena.
Siyayithobela yonke imiqathango yokhuseleko yamva nje malunga ne-Covid. Iivillas zibulawa iintsholongwane ngokupheleleyo emva kokuhlala. Ubushushu bujongwa yonke imihla. Abasebenzi banxibe iimaski kwaye isicoci sezandla senziwa sifumaneke.
Siyakufumaneka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ukukunceda. Iqela le-10 (ukucoca, ukugcinwa kunye nokhuseleko) liya kukunceda yonke imihla ukuba ufuna nantoni na. Indlu yabasebe…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- West Praya